नाकबाट रगत बग्ने समस्या छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
Home / समाचार / नाकबाट रगत बग्ने समस्या छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
नाकबाट रगत बग्ने समस्या छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय 0
प्रायजसो गर्मी मौसममा नागबाट रगत बग्ने समस्याले धेरैलाई पिरोलेको हुन्छ।बोलचालको भाषामा यसलाई नाथ्री फुटेको भनिने गरिन्छ।कसैलाई गर्मीखाले खानेकुरा खाने वित्तिकै नाकबाट रगत बग्ने गर्छ भने कसैलाई यत्तिकै पनि रगत बग्ने समस्याले सताइरहेको हुन्छ।
विभिन्न संक्रमण, अत्यधिक गर्मी र नाक सुख्खा हुँदा नाकबाट रगत बग्ने (नाथ्री) समस्या बढी हुनेगर्छ।संक्रमणकै कारणले यस्तो हुने विशेषज्ञहरु बताउँछन्।
रगत जमाउने तत्वमा कमी आउँदा, रगत पातलो बनाउने अौषधि सेवनका कारण पनि रगत बग्ने गर्छ।अत्यधिक गर्मीको समयमा बढी मसलादार खाना खाँदा पनि नाकबाट रगत बग्न सक्छ। अर्को कुरा दिमागमा चोट लागेमा पनि यस्तो लक्षण देखिन सक्छ।
सामान्यतया नागबाट रगत बग्दा व्यक्तिले बिरामी महशुस गरेको पाइदैन। आराम गरे केही समय रगत बग्न पनि रोकिन्छ।तर यस्तो अवस्थामा व्यक्तिले बिरामी भएको महशुस गरेमा तुरुन्तै जाँच गराउनुपर्ने चिकित्सक सुझाउँछन्।
गर्मी समयमा रिंगटा लागेमा वा टाउको भारी भएमा नाथ्री फुट्ने सम्भावना बढी हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा घरेलु विधि अपनाउँदा पनि फाइदा हुन्छ।
नाथ्रीबाट बच्न घरेलु विधि
– टाउको माथि गरेर चिसो पानीको धारा बनाएर खन्याउने । यसाे गर्दा नाकबाट रगत बग्न बन्द हुन्छ।
– नाथ्री फुटेको अवस्थामा नाकको सट्टा मुखले श्वास लिनुपर्छ।
– काटेको प्याजको टुक्रा सुँघेर राख्दा रगत बग्न बन्द हुन्छ।
– रगत बग्नबाट रोक्न टाउको माथितिर झुकाउनुपर्छ।
– अलैंचीको धूलोलाई चिसो पानीमा राखेर पिउँदा फाइदा हुन्छ।
– एक गिलास पानीमा बेलको पात पिसेर राख्ने। त्यसमा मिश्री मिसाउने।यसरी मिसाएको पानी पिउँदा बिरामीले छोटो समयमै आराम महशुस गर्छ।
– नाथ्री फुटेको बेला एउटा सफा कपडामा वर्फ राखेर केही समय नाकमा राखी छाेड्ने । यसो गर्दा नाथ्री फुटेको निको हुन्छ।
सोनम कपुरको विवाहमा पाहुना बोलाउने अनौठो तरिका